Shaqaalaha TV-ga Sweden oo shaqooyinkoodii ugu noqday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shaqaalaha TV-ga Sweden oo shaqooyinkoodii ugu noqday
La daabacay tisdag 10 januari 2017 kl 14.09
Shaqaalaha TV-ga iyo idaacada Sweden oo dib shaqadoodii u bilaabay. sawir: Sawirqaade: Thomas Johansson/TT
Shaqaalaha TV-ga iyo idacadaa Sweden ee magaalada Göteborg oo shaqooyinkoodii dib u bilaabay, kadib markii boolisku baadhay warqad loo maleeynayey in sun lagu soo diray.
Wakaalada wararka ee TT ayaa daabacday in shaqaalaha idaacadda iyo TV-ga Sweden ee magaalada Göteborg dib u bilaabeen shaqadoodii, kadib markii boolisku xaqiijiyey in aneey ku jirin wax halis ahi warqadii loogu hanjabay goobtan.
Saacadu markay ahay 9:kii subaxnimo oo ayaa shaqaalaha TV-ga SVT iyo idaacada Sveriges Radio lagu amray in ay ka baxaan xafiisyadooda kadib warqad hanjabaad ah oo ay ku jiraan wax loo maleeyey sun halis ah.
Booliska ayaa inkasta oo ay sheegeen in anay warqada ku jirin wax halis ahi. hadana u arka dhacdadan mid aan loo dulqaadan karin, waxanay bilaabeen denbi baadhis lagu raadinayo dadkii kadanbeeyey hanjabaadan.
Budo cad oo loo soo diray SVT iyo Raadiyaha Iswiidhan
tisdag 10 januari 2017 kl 10.39